Internet download manager full version key ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Internet download manager full version key
1:20:00 pm Download No comments
internet download manager ကိုတော့ လူတိုင်းလိုလို သိကြပါလိမ့်မယ် ။ ကီးထည့်ပုံထည့်နည်းတွေက လဲ ဘလော့တိုင်းလိုလို မှာရောဆိုဒ်တိုင်းလိုလို မှာပါ ပလူပျံ နေအောင်တင်ကြတာတွေ့ ရပါတယ် ။ အဲထဲမှာ တချို့ ကတော့ တကယ် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အရမ်း ရှုပ် ထွေးနေတော့ထည့်လို့ မရတဲ့ သူတွေ များနေပါသေးတယ် ။ နောက်ပြီးတစ်ချို့ဆိုဒ်တွေမှာ တင်တဲ့ အခါမှာလဲ Download လင့်က အလုပ်လုပ် သလား သေနေလားဆိုတာ ကို မစစ်ဆေးပဲ ဟိုဘက်ဆိုဒ်မှာ တွေ့ လို့ သဘောကျလို့ငါလည်းတင်မယ် ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင် မလုပ်ကြည့် မစမ်းကြည့်ပဲ လျှောက်တင်တဲ့ လူတွေကလဲ များသားကလား ။ တချို့ ကျပြန် တော့Patchဟတ်ဆော့ဝဲ လေးတွေနဲ့ တင်ကြပြန်ရဲ့ အဲဒါမျိုးတွေ ကို ကွန်ပြူတာထဲ ထည့်လို့ ကတော့ Antivirus ကို မသုံးပဲ ပိတ်ထား ရပြန်ရော .... ။
Patch လေးနဲ့Full ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်းကို တကယ်ကြိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Antivirus ပိတ်နေရတာတော့သိပ်တော့မမိုက်ဖူးပေါ့နော် ... ။ နောက်ပြီး Update လုပ်ရင် ကီးပြန်တောင်းတောင်းနေတော့ မမိုက်ပြန်တော့ဘူးပေါ့ ။ ကျွန်တော့ ခုတင်ပြမဲ့ IDM Full ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ နည်းက hosts ဖိုင်လေးကို system 32 ထဲထည့်ပြီး Register လုပ်တဲ့နည်းပါ ။ တစ်ခါ Register လုပ်ပြီးရင် နောက်ထပ် Update ထပ်လုပ်လဲ နောက်ထပ်ကီး မတောင်းတော့အတွက် တကယ် အဆင်ပြေပါတယ် ။ တကယ်လဲ ထိရောက်ပါတယ် ။ လွယ်လဲလွယ်ကူ လှတလို ပုံတွေ နဲ့ လဲ အသေးစိပ် ဖေါ်ပြ ပေးထားတဲ့ အတွက် လူပိန်းတွေတောင် လုပ်တတ်မှာပါ ။
1 .Download အရင်ဆွဲပါ ။
ပြီးသွားရင် ဆော့ဝဲကို အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ ။ Register လုပ်ဖို့ တောင်းလာလိမ့်မယ် ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါ ။
2 . ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ထဲ က hosts ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို Copy လုပ်လိုက်ပါ ။
3 .ပြီးရင် Start ကိုဝင် My Computer ကိုဖွင့်ပါ ။
4. Local Disk ကို ထပ်ဖွင့်ပါ ။
5. WINDOWS ကိုဖွင့်ပါ ။
6 .system 32 ကိုဖွင့်ပါ ။
7. drivers ကိုထပ်ဖွင့်မယ် ။
8. etc ကိုထပ်ဖွင့်ပါ ။
9. Paste လုပ်ပါ ။
10 .Yes ကိုနှိပ်ပေးပါ ။ ပြီးရင် ပိတ်လိုက်တော့ ။
11 . ခုinternet download manager မှာ Register ကီးထည့်တော့မယ် ။ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ Notepad ထဲကကုဒ်တစ်ခုကို Copy ကူးလိုက်ပါ ။
12 . အောက်ပါ အတိုင်း ပုံစံ ဖြည့်ပေးပြီး ok နှိပ်ပေးပါ ။
13 . ထပ်ပြီး ok ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ။
ခုဆိုရင် internet download manager မှာ ကီးထည့်ပြီး သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် full version ဖြစ်သွားပါပြီ ။
ဒေါင်းချင်တာတွေ ကို ဒေါင်းချင်သလောက် ဒေါင်းပေတော့ဗျာ ။
အဆင်မပြေတာရှိရင် အောက်မှာအော်သွားပါ ။